Shaati dheeri ah oo dheeri ah? | Ragga Stylish
Ka mid ah isbeddelladaas soo socda oo ku saabsan kordhin shaatiyadaha ayaa ah midka inta badan soo jiita indhahayga. Durba waxaa jira dhowr xilli oo isku dayaya inay naga iibiyaan hoosta shaatiyadaha dhexda si cusub. Aasaasiyadu way sii dheeraanayaan wayna sii dheeraanayaan dhididka -too- daboolay ka soo baxa daaqadaha dukaamada.
Weligey arki maayo nimcada inaan xirto dhar kaa dhigaya inaad dareento lug-gaaban, marka laga reebo waxyaabo gaar ah oo gaar ah. Tusaale ahaan, leh kaarig isku mid ah oo dheeri ah ama blazer oo isna muddo dheer la jarjaray, umuuqdaan kuwa isku waalan sida:
Laakiin, way igu adag tahay inaan arko sida isbeddelkani u gaadhay xag-jirnimada ... wuxuu noqon karaa mid soo jiidasho leh si kasta:
Sikastaba xaalku ha ahaadee, mararka qaar waxaan ku dembaabnaa dhaqan dhaqameed aad u adag waana nagu adag tahay in aan ka baxno qaabka ugu caansan ee shaatiyada, laakiin wali ma arko wax dan ah oo aan ka leeyahay.
Maxay kula tahay Ma jeceshahay isbeddelladan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Shaati dheeri ah oo dheeri ah?
Ma aqaano ... waxay u yimaadaan sidii dhar oo kale
Ku jawaab PeterPan
Duqa Magaalada Enrique Vázquez dijo
goonnada dharka lagu seexdo oo maqaarkoodu hoose yahay? Maya mahadsanid
Jawaab Enrique Vázquez Alcalde
Waxaan jeclahay shaatiga cad, sidee ku iibsadaa
Jawaab David Pálinka
Marchena 1010 dijo
Sideen ku iibsadaa midka cad ee xarfaha carabta?
Ku jawaab Marchena 1010
queeeee buueeenaaaas remeeeraaaaasss… !!!!!! sidee ku iibsadaa .. ??